CPJ oo ka Hadashay Xarig-ga wariyayaal ka tirsana Tv-ga Universal – Radio Daljir
Oktoobar 6, 2015 5:20 b 0
Talaado, Oktoobar 06, 2015 (Daljir) —Golaha Badbaadinta Suxufiyiinta ee CPJ ayaa war kooban ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay aad uga xun yihiin xariga loo geestay wariyaasha u shaqeeya Tv-ka Universal oo kala ah agaasimaha Tv-ga ee Bariga Afrika Cabdulaahi Xirsi Kulmiye iyo Wariye sare Cawil Dahir Salaad.
CPJ ayaa warkeeda ku sheegtay in xariga wariyaasha loo geestay ay tahay wal wal wali dhinca amaanka oo ka jira dalka Soomaaliya.
Tom Rhodes wakiilka CPJ ee bariga Afrika ayaa sheegay in ay si kulul u cambaareenayaan xariga wariyaasha iyo talabaadi ay albaabada iskugu laabeen laamaha amaanka Soomaliya Xarunta Universal ee magaalada Muqdisho.
Tom Rhodes ayaa ku baaqay in laamaha amaanka Soomaaliya ay joojiyaan dhibateynta aan loo aabo yeelin Suxufiyiinta oo ay ixtiraamaan Xoriyadda Saxaafada sida uu ku baaqayo Dastuurka dalka.
Wariyaasha xiran ayaa lagu heestaa Barnaamij uu diyaariyay Wariye Cawil Dahir oo looga dooday arimaha ciidamada Shisheeye ee ku sugan Soomaaliya ayna kala qeyb galeen mudanayaal ka tirsan Barlamaanka Soomaaliya.